Home > About MVA > Information
Myanmar Veterinary Association (MVA)
မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းအခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော် မတီမှလွတ်လပ်စွာမဲပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို (၃)နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များအသင်းသည် NGO အသင်းဖြစ်ပြီး မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးကုသရေးဦးစီးဌာန ၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန)၊ မြန်မာ့မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ Office International Epizootic (OIE)၊ World Veterinary Association (WVA)၊ Federation of Asian Veterinary Association (FAVA) တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ဒေါက်တာမောင်မောင်စ၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဘွဲ့ ဘီ၊ ဗွီ၊ အက် (စ်) နှင့် အလားတူဘွဲ့) ရပြီးသူများထံမှ အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန် ဆန္ဒမဲတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ရရှိခဲ့သည့် ဆန္ဒမဲများဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဦးပု (မန်နေဂျာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်း) အပါအ၀င် (၁၅) ဦးဖြင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အသင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီး ဖွဲ့စည်းခွင့်လက်မှတ် (၁၁၀၄) ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ အသင်းကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း စတင်ပေါက်ဖွားစေရန်အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆာင်ရွက်ခဲ့ကြသူများ မှာ အောက်ပါတိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်ကြီးများမှာ အထူးပင်မှတ်တမ်းတင်အပ်သူ (Founding Fathers) များ ဖြစ်ကြပါသည်။
Dr. Mya Nyun
B.Sc. (1952), M.R.C.V.S (Edin) (7/57), M.Sc. (Guelph) (1965)
University of Veterinary Sciences, Yezin
Dr. Saw Wahler
B.Sc (3/53), B.V.M&S (Edin) (7/59), M.R.C.V.S (Edin)
(Deseased on 14 June 2010)
Dr. Tha Khin
B.Sc, B.V.Sc (Punjab) 9/55
Director General (Retd),
Livestock Breeding and Veterinary Department., Insein
(Deseased on 13 Jan 2011)
B.Sc, M.R.C.V.S (Edin), 6/56,
Dr. U Pu
Factory Manager (Retd),
Burma Pharmaceutical Industry, Insein
မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်းသည် ခေတ်မီတိုးတက်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့် မွေးမြူ ရေးပညာရပ်များ ပြန့်ပွားစေရန် လုပ်သားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ အကျိူးစီးပွားကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဤအသင်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။
(က) မြန်မာနိုင်ငံတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ ညီလာခံကို အခါအားလျောစွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
(ခ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာရှင်များအား အထွေထွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဂျာနယ်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းများ ထုတ်ဝေခြင်း။
(ဃ) အသင်းပိုင် စာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
(င) ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊ ဟောပြောပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
(စ) တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာနှင့် မွေးမြူရေးပညာရပ်များဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အားပေးကူညီခြင်း။
(ဆ) အလားတူရည်ရွယ်ချက်ရှိသော ပြည်တွင်းပြည်ပအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဇ) အသင်းဝင်များ၏ လူမှုရေးကိစ္စများ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
Dr. U Maung Maung Sa
မြန်မာနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
နှစ်အလိုက် MVA အသင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဥက္ကဋ္ဌများ
ဒေါက်တာဦးပု (၁၉၇၆ - ၁၉၇၇ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာဦးပု (၁၉၇၇ - ၁၉၇၈ ခုနှစ်)
ဒေါက်စောဝါလား (၁၉၇၈ - ၁၉၇၉ ခုနှစ်)
ဒေါက်စောဝါလား (၁၉၇၉ - ၁၉၈၁ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာသာခင် (၁၉၈၁ - ၁၉၈၃ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာမောင်မောင်စ (၁၉၈၃ - ၁၉၈၈ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာကျော်ဇေယျ (၁၉၈၈ - ၁၉၉၈ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာဖေတင် (၁၉၉၉ - ၂၀၀၀ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာသံဒိုင် (၂၀၀၁ - ၂၀၀၃ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာသံဒိုင် (၂၀၀၄ - ၂၀၀၆ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း (၂၀၀၇ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာအောင်ကြီး (၂၀၁၀ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်)
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်တင်မြိုင် (၂၀၁၃ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်)
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (၂၀၁၆ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်ငွေ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
နှစ်အလိုက် MVA အသင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အတွင်းရေးမှူးများ
ဒေါက်တာမောင်မောင်စ (၁၉၇၆ - ၁၉၇၇ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာတင်မောင် (၁၉၇၇ - ၁၉၇၈ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာဇော်ဝင်းမောင် (၁၉၇၈ - ၁၉၇၉ ခုနှစ်)
ဒေါက်မောင်မောင်စံ (၁၉၇၉ - ၁၉၈၁ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာတင်ဝင်း (၁၉၈၁ - ၁၉၈၃ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာသောင်းဝေ (၁၉၈၃ - ၁၉၈၈ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာအောင်မြင့် (၁၉၈၈ - ၁၉၉၈ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာအောင်မြင့် (၁၉၉၉ - ၂၀၀၀ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာအောင်မြင့် (၂၀၀၁ - ၂၀၀၃ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာအောင်ကြီး (၂၀၀၄ - ၂၀၀၆ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာအောင်ကြီး (၂၀၀၇ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (၂၀၁၀ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာစိုးမင်း (၂၀၁၃ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာစိုးမင်း (၂၀၁၆ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
ဒေါက်တာတိုးမင်းထွန်း (၂၀၁၉ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်)